July 10, 2019 - Update New
ထွက်ခွာပြီး (၃၇)နှစ်ကြာမှ ပြန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ FLIGHT 914 လေယာဉ်ရဲ့ တကယ့်အမှန်တရား
July 10, 2019 Naing 0
ထွက်ခွာပြီး (၃၇)နှစ်ကြာမှ ပြန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ FLIGHT 914 လေယာဉ်ရဲ့ တကယ့်အမှန်တရား လွန်ခဲ့တဲ့ (၆၄)နှစ်အချိန်က တစ်ကာမ္ဘာလုံး တှုန်လှုပ်ဖွယ်ရာသတင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကတော့ (၁၉၅၅)ခု ဇွန်လ (၂)ရက်နေ့၊ မနက်ခင်းအချိန်ပါ။ Pan American Flight 914 လေယာဉ်ကြီးဟာ နယူးယောက်ကနေ မီယာမီကို […]
ကားပေါ်မှာ . ဆေးခန်းမှာ … လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရသူတချို့ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်များ
ကားပေါ်မှာ . ဆေးခန်းမှာ … လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရသူတချို့ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်များ နေပြည်တော် ပုဂ္ဂလိက မူကြိုကျောင်းသူလေးတစ်ဦး မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်ခံရမှုသတင်းက ပြည်သူတွေကြားမှာ လှုပ်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်အမှုဖြစ်ပျက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကလေးငယ်ဘဝမှာ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စော်ကားခံခဲ့ရတယ်ဆိုသူတချို့က လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရော အပြင်မှာပါ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ပြောဆိုလာတာ […]
အိပ်ယာထောင့်မှာထားမယ့် သံပရာသီး၏အစွမ်းသတ္တိများ ဝေးဝေးပြေးပါ အဆိပ်သတ္တဝါ လူတွေဟာ အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ရံ အခံရဆိုးတဲ့ ကြမ်းပိုးကိုက်ခြင်းကိုလည်း ခံရတတ်ပါသည်။ ပုရွက်ဆိတ်လို အကောင်အသေးစားမျိုးလည်း အိပ်ရာပေါ်တက်လာတတ်သလို အဆင်မသင့်ရင် အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါတွေလည်း(နေရာ၊ ဒေသကိုလိုက်လို့) တက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင်တော့ မိမိအိပ်တဲ့ ခုတင်အပေါ်ထောင့်လေးထောင့်မှာ သံပုရာသီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တစ်လုံးစီ […]
Victoria အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
Victoria အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် Victoria အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန် စွပ်စွဲချက်များ၊ ဆူပူ ဆန္ဒပြစေရန် လှုံ့ဆော်မှုအရေးအသားများ ပြုလုပ်ပါက အရေးယူသွားမည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကြေညာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် Victoria အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးစာပြန်ကြားချက်၊ CCTV မှတ်တမ်း၊ ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ […]
YBS 14 ပေါ်မှာ ဖင်ခွဲ ခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး ရုပ်သံ ဒီနေ့ ညီမ YBS (14) ပေါ်မှာ ဘောင်းဘီ ဖင်ခွဲ ခံလိုက် ရပါတယ် (ဖင်နေရာပဲ ရွေးခွဲ ခံရတာမို့ ဖင်ခွဲတယ်လို့ပဲ ရေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်) ဘောင်းဘီ အရှည် […]
ကမ္ဘာ့အဆင့် ၈၄ ထိတက်လာတဲ့ မြန်မာကြက်တောင်ရိုက် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ မြန်မာကြက်တောင်ရိုက် အားကစားမယ် မသက်ထားသူဇာဟာ ကမ္ဘာ့ကြက်တောင်ရိုက် အဖွဲ့ချုပ်က မနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အဆင့် ၈၄ အထိ တက်လာပါတယ်။ ၂၀၂၀ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ မသက်ထားသူဇာဟာ ဇူလိုင်လ ၇ […]
ကလေးကို ကလိထိုးခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ ကလေးတွေကို ကလိထိုးခြင်းက သိပ်ကို အန္တရာယ် များပါတယ်။ လူကြီးတွေက ကလေးကို စနောက်ချင်လို့ ကလိထိုးကြပါတယ်။ကလေးကို ကလိထိုးလို့ တခစ်ခစ် ရယ်နေခြင်းက ကလိထိုးတာကို သဘောကျလို့ ရယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ယားတတ်တဲ့ ကလေးတွေက ကလိထိုးတဲ့အခါ မကြိုက်ရင်တောင် ရယ်တာ မရပ်တော့ပါဘူး။ […]
သက္ကမိုးညို အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို ဖမ်းရခြင်း အကြောင်းရင်း…
သက္ကမိုးညို အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို ဖမ်းရခြင်း အကြောင်းရင်း… နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားဟု အမည်ပေးထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရသည့် မိန်းကလေးငယ် အမှုကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် သက္ကမိုးညို အကောင့်ပိုင်ရှင် ကို ပျဉ်းမနားရဲစခန်းမှ အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးပြီးနောက် ကျပ်သိန်း (၁၀၀)အာမခံ ပေးခဲ့သည်။ […]
နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ် ခုနောက်ပိုင်း ဆိုင်ကယ်တွေမှာ အမိုးလေးတွေ တော်တော်များများ တတ်စီးနေတာကိုတွေ့ရပါသည်။ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကာကွယ်ဘို့လား/မိုးရွာတဲ့အခါ အကာအကွယ်ဖြစ်အောင်လား /Styleဖြစ်အောင်လို့လား/ထင်မိပါသည်။ သို့သော် ဆိုင်ကယ်စီးစဉ်မှာ မိမိအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဆုံး အဓိကအရာဖြစ်သည့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကိုတော့ဖြင့် မေ့လျှော့နေတာလား ? တမင်ချန်ထားခဲ့လေသလား?Showပဲ့မှာဆိုးလို့လား? (နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ်) ဒီအမိုးလေးဟာ ဆိုင်ကယ်မောင်းသူအတွက် အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်နေသလို/အန္တရာယ် ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါဘဲ […]
မုဒိမ်းသမားတွေကို အပြစ်ရှိကြောင်း တရားစီရင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဓိက သက်သေ
မုဒိမ်းသမားတွေကို အပြစ်ရှိကြောင်း တရားစီရင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဓိက သက်သေ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ကထိုင်းနိုင်ငံ ခွန်ကင် ခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားရဲ့သမီး မိန်းခကလေး ကို အိမ်သာထဲခေါ်သွားပြီး – မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တဲ့ တရားခံကို ဘာအချက်တွေနဲ့တရားခံအဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ခွန်ကင် […]